यसपाली काजीको बिहे होला त ? « Intro Nepal
यसपाली काजीको बिहे होला त ?
Published On : २ आश्विन २०७६, बिहीबार १७:३५
फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ असोज ३ गते शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउँदै छ । अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीको वरिपरी फिल्मको कथा बगेको छ । मुख्यतया फिल्मको पहिलो भाग देखि नै फिल्मका मुख्य पात्र ‘काजी’ (दयाहाङ राई)को विवाहको लागि हुने दौडधुपमा फिल्मको कथा घुम्ने गरेको छ । काजीको बिहे, काजीले मन पराएको सोल्टिनी, काजी र सोल्टिनी बिचमा आउने अन्य पात्रहरुले नै फिल्मलाई तेश्रो शृंखलासम्म ल्याइपुर्याएका छन् । कबड्डीको हरेक शृंखला हेर्दै जाँदा फिल्मको अन्त्य सम्म दर्शकको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिन्छ, ‘के यो शृंखलामा काजीको बिहे हुन्छ ?’ ।
पहिलो र दोश्रो सिरिजमा हुन नसकेको काजीको बिहे के कबड्डीको तेश्रो शृंखला ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’मा होला त ? त्यसको लागि फिल्मको प्रदर्शन नै कुर्नु पर्ने हुन्छ । तर, कबड्डी फिल्म सिरिजको मुटु बनेको ‘काजी’ र ‘काजीको बिहे’ दर्शकलाई हल सम्म तान्ने एक हतियार नै बनेका छन् । राम बाबु गुरुङ निर्देशित कबड्डी शृंखला कतियौँ भाग सम्म पुग्छ त्यो त अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, यो शृंखलामा काजीको बिहे भएको हेर्न चाहने दर्शकहरुको भिड पक्कै बाक्लै छ ।
कबड्डी कबड्डी कबड्डीमा दयाहाङ र उपासनासंगै कर्मा, विल्सन विक्रम राई, वुद्दि तामाङ, बिजय बराल, माओत्से गुरुङ, लुनिभा तुलाधर, कमल मणि नेपाल, अरुणा कार्की पोखरेल, रिस्मा गुरुङ, पुस्कर गुरुङ, कबिता आले, डक्टर सिंह गुरुङ, शिला खनाल, मणि के. राई लगायतको समेत अभिनय रहेको छ ।